Ny tebiteby mihetsiketsika eo amin'ny andaniny sy ny ankilany dia ny volony lava sy midina. Haibiby, haingon-tsoavaly amin'ny lafiny iray. Ahoana ny fomba hametrahana tehamaina?
Slinging bangs - ny safidy tsara indrindra amin'ny endriky ny endriky ny volo sy ny volom-borona amin'ny karazana tarehy rehetra
Ny antsipiriany kely amin'ny tarehy dia afaka manova tanteraka ny endriny ary misy fiantraikany amin'ny sary rehetra. Ny tendron-tsikombakomba na asymmetrika dia manerana izao tontolo izao, satria mifanaraka amin'ny karazana tarehy rehetra izany. Miankina amin'ny endriny sy ny halavany, ny singa volo dia manampy amin'ny fanafenana ireo hadisoana ary manantitrantitra ireo toetra mahasoa.
Ahoana no fomba hanapahana ny andilanao?
Raha tsy misy faniriana na fahafahana handeha any amin'ny profesora, dia mora ny miova ao an-trano. Ny kofehy manjelanjelatra eo an-damosiny dia mora atao, mba hamoronana azy dia mila fitaovana kely ianao:
Miresaka na mitambolimbolina amin'ny seha-manasaraka;
Ny vy (manify ny tendany) dia tsy misy afa-tsy ny volon'izy ireo mifamatotra;
Fanosehana fanosehana (raha misy, afaka ataonao tsy misy);
horonam-peo fanontam-pirinty (fakantsary).
Fehiny lava eo amin'ny ilany
Ny endritsoratry ny antsipiriany momba ny volom-borona dia hifanaraka amin'ireo vehivavy manana endrika tsy hita maso. Ny tsipika manify sy manaloka eo an-damosiny dia hanampy amin'ny fanovàna sy amin'ny fomba mazava tsara:
takolaka lehibe sy cheekbones;
ambany na avo loha;
Ahoana no tapaka ny fihazakazaka lava eo amin'ny sisiny:
Tafio ny tady hozakaina eo anoloana mba hahafahan'ilay fizarana ny endriky ny triatra. Tsara ny manamboatra azy io amin'ny valopy matetika.
Ny fitazonana ny handriny amin'ny handriny amin'ny endriny sy ny rantsan-tanana eo antenatenany, "andramo" izany ary hamaritana ny halavan'ny fotoana.
Raha tsy mamoaka ny tady mitebiteby amin'ny tanana, alao ny volony manandrify ny masony. Atombohy ny manapaka ny volondriho, tazony ny hodi-masony amin'ny sehatra (mahazatra amin'ny tsipika).
Tohizo ny manapaka ny "fefy", mampitombo tsikelikely ny halavany.
Ny tsipika voatsindry dia tsy maintsy manjaitra (diagonal).
Manaova kofehy ary alamina ireo bandy. Hamafiso izany.
Kely fohy eo amin'ny lafiny
Ny endrik'ity horonam-peo ity dia maneho bebe kokoa amin'ny vehivavy manana tarehy oval, manantitrantitra ireo drafitra tena izy. Ny rindrina fohy somary manify dia atolotra indraindray amin'ny tompon'ilay akorandriaka sy ny loha lehibe. Afaka manampy anao amin'ny alalan'ny fanampiany ianao:
mandanjalanja ny isam-bolana;
mampitaha ny habaka eo amin'ny tampony sy ny tendrony;
manome ny fomban'ny volon-doha sy ny endriny tokana.
Ahoana no ahafahan'ilay vehivavy tera-bao eo anilany:
Volo marevaka marevaka ary manongotra azy tsara. Rehefa mitazona ny tady mitebiteby amin'ny tananao ianao dia atomboy amin'ny farany ilay farany.
Ampidino ny tebiteby, ary asehoy amin'ny totozy ny sifotra amin'ny rantsantanana sy ny rantsantanana eo an-tanana.
Miala amin'ny diagonaly, tapaho ny lafiny fohy amin'ny curl.
Ahitsio ny tandroka oblique, mitazona ny hodi-kazo amin'ny fomba henjana.
Volo maina sy laika.
Fehin-kiraro mihenjana eo amin'ny sisiny
Ny "Air" kofehy matevina dia manampy ny lanjany amin'ny sary, noho izany dia mampiasa azy ireo ny hairdresser amin'ny ankapobeny mba hanalefahana ny endriky ny kavina sy ny loko. Ny volo mangatsiaka dia natao fotsiny ho an'ny volo tonga lafatra. Amin'ny fefy na onja sarotra, dia tsy hita maso ny rafitra ngezabe, ary ny bozaka dia hijery somary mihidy sy "mena".
Raha toa ny kirarokely rovitra eo amin'ny sisiny dia voatsikera (manindrona):
Misafidiana ny tady eo anoloana, manamboara azy miaraka amin'ny menaran'omby miaraka amin'ny nify mahazatra sy matetika.
Zarao ny andilany na ny diagonal ho avy eo amin'ny tara ambony sy ambany.
Ny tsirairay amin'izy ireo dia tokony hokapaina, mitazona lakaingotra araka ny tokony ho izy. Amin'ity tranga ity dia tokony hambara ny "fefy", noho izany dia ilaina ny mampihena ny fizarana matevina amin'ny làlan-dàlana hafa (miovaova - bebe kokoa, latsaky). Noho izany dia mitodika mitandrema be dia be.
Atsofohy eo anoloana ny curl ary omeo azy ny endrika faniriana.
Apetraho ny tady mitebiteby.
Haibiby misy tsipìka eo anilany
Ny singa notakiana dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny karazana horita vavy, manantitrantitra ny rafitra sy ny sarany. Ny mpitsabo matetika dia mampifangaro tsikombakomba mifanohitra - fohy fohy miaraka amin'ny lavaka lava eo amin'ny ilany na lava lava mitongilana eo afovoan'ny loha. Tsy dia manintona sy mahomby fotsiny izy io, fa manome fanitsiana amin'ny maso koa ny endrika endrika.
Haibiby miaraka amin'ny tendron-drakitra amin'ny volo fohy
Ny dikan-teny malaza indrindra amin'izao vanim-potoana izao dia tsangambato mahazatra hatrany amin'ny afovoan'ny sofina. Io fihetsika fohy io miaraka amin'ny lavaka lava amin'ny lafiny iray, nopotehin'ny scythe, dia mijery tsara tarehy sy vehivavy. Bob miaraka amin'ny antsipiriany fanampiny dia azo atao amin'ny sary rehetra. Ny tadiny malefaka sy ny tendron'aliny, ary ny fingadahin-doha mahazatra dia tena tsara ho an'ny vehivavy mpivarotra sy mpanaraka ny fomba mahafinaritra. Voafolotry ny fikorontanana, manapotipotehina ny sarin'ny tanora sy ny grunge .
Misy saribakoly fohy hafa mahavariana miaraka amin'ny fihokoana eo amin'ny sisiny sy ny tendron-tsikombakombana:
kianja fohy eo amin'ny tsato-kazo ;
Fihetseham-poko mihantona eo amin'ny volo midadasika
Ny dingana voalaza etsy ambony dia mifanaraka tanteraka amin'ny singa ao amin'ny volo voafantina. Fiovan'ny toetrandro - efamira efa lava be miaraka amin'ny fihantsiana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Mahafinaritra tokoa ny vehivavy manana tarehimarika mivangongo sy mivelatra, satria manamaivana ireo singa goavam-be sy manatsara ny kibony. Toy izany ihany koa, amin'ny fangatahana sy ny kianja mahazatra miaraka amin'ny fihokoana amin'ny lafiny iray. Ny antsipiriany mibaribary amin'ny endriky ny tarehiny dia manome ny mistery sy ny maha-vehivavy ny sary, mampiavaka ny maso sy ny molotra.
Fitiavam-bolo hafa, tsara mifangaro amin'ny bakteria asymmetrika:
Mitarazoka be amin'ny volo lava
Ny fantsom-panafody eo ambany soroka dia tsy maintsy manoratra fotsiny ny antsipiriany momba ny volo. Raha toa ka eo amin'ny ambaran'ny kavina na kavina, dia toy ny kofehy tsara tarehy ny tarehy asymmetrika. Ny fehiloha fohy eo amin'ny lafiny iray amin'ny volo lava noho ny fifanoherana dia hanasongadina ny famirapiratan'ny kofehy. Ankoatra izany, hanitsy ny endrik'ilay tarehiny izy io, ary hanakaiky ny oval lavorary.
Ny teboka eo anilan'ny volo lava dia tapaka eo amin'ny tsipika mahitsy, mifanaraka tsara amin'ny fomba fikarakarana manaraka:
a cascade long;
kianja sy tsaramaso lava.
Akory ny hatsaran-tarehy eo amin'ny andaniny?
Misy fomba maro hametrahana ny singa volo voavolavola, zava-dehibe ny fisafidianana ny fiovana mifanaraka amin'ny karazana volom-borona sy tarehy. Fomba tsotra sy tsotra, ny fomba fametrahana tehamaina eo amin'ny andaniny, raha toa ka voadona sy mitokona:
Atsofohy ny tavy ary diovy amin'ny volo maina izany, ary apetraho eo amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny toerana misy azy. Izany dia manampy amin'ny fanoratana ny volomborona.
Amin'ny fako sy ny fofona, tsara ny manodinkodina volombava eo amin'ny fotony, ary mametaka azy ao anatiny.
Tohizo ny manodinkodina ny toro-hevitra.
Toy izany koa, manome ny endriky ny endrika, fa manondro ny hiafarany. Tazony ilay tady eo amin'ny lalana izay aorian'ny fanangonana ny andilany.
Arovy ny toerana misy ny volon'ondry miaraka amin'ny menaka.
Atsoroy ny tady mitovitovy amin'ny varny.
Na dia mbola tsy maina aza ilay mpikarakara fanamafisana, dia fenoy ny fanitsiana amin'ny rantsantanana.
Ireo lamaody miaraka amin'ny fihokoana amin'ny lafiny iray
Ity antsipirihany mitovitovy amin'ny lokony ity dia manjary tsikombakomba amin'ny fikarakarana sy ny fanao isan-karazany. Ny haingon-tarehy ambony amin'ny lava lava eo amin'ny lafiny iray dia mijery elegant sy mamy am-pitiavana. Ataon'izy ireo sary vetaveta ny vehivavy iray, mamelombelona ny sary. Raha mihodinkodina kely ny tady eo anoloana, dia tsy hiantehitra ny fametahana, miaraka amin'ny fanehoana ny natiora voajanahary sy ny tsy fahita firy.
Asiana metamétrie boribory mifanaraka amin'ny tavy sy ny harona samihafa. Manasongadina ny famolavolana maotina amin'ny volony izy, dia manjary loha-javatra ho azy ireo, indrindra raha voalamina amin'ny vy. Ny bangarena koa dia azo tapahina amin'ny ampahany amin'ny solaitrabe na alaina tsimoramora ao ambadiky ny sofina, ary efa nanodikodina ny kofehy matevina miaraka amin'ny kofehy. Noho izany dia tsy hanelingelina na hanelingelina izany, raha ampitahaina amin'ny fanavaozana ny sariny.
Esory menaka amin'ny lokon'ny lokony
Henna ho an'ny volom-borona
Haavo avy amin'ny volo voajanahary
Famaritana amin'ny alalan'ny cap
Kefir amin'ny volo
Mainty ny volom-borona
Volo mitsitsy amin'ny keratin
Colin Farrell tao amin'ny fampisehoana Ellen Degeneres izay niresaka voalohany momba ny fitiavany mistery
Kitapo azo ampiasaina ho an'ny zaza vao teraka
Fifaninanana ho an'ny Halloween
Moa ve vehivavy bisexual Kristen Stewart no vehivavy vaovao?
Inona no havoaka any Tallinn?
Karazana rustic ao amin'ny multivarquet - fomba mahavariana mahavelona amin'ny sakafo mahandro sakafo
Karnavaly any Arzantina
Mofomamy mamy amin'ny mastic
Fomban-tany any Luxembourg
Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy
Sandals - fironana 2016
Inona no ilainao hanokatra IP?
Fomba entina miala amin'ny eritreritra ratsy - toro-hevitra momba ny psikology